विवाहपछिको पढाइले ल्याएको खुसी - जीवन शैली - प्रकाशितः श्रावण ३०, २०७३ - नारी
विवाहपछिको पढाइले ल्याएको खुसी
हास्यकलाकार राजु कमेडीको जोडी (नारायण बाजे ) तस्विर: नवराज वाग्ले
आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू आफैमा सक्षम र आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन् जसका लागि उच्च शिक्षा अनिवार्य तत्व हो ।
श्रावण ३०, २०७३
विवाह भनेको सामाजिक परम्परा हो यसलाई नकार्न सकिँदैन तर, विवाहपछि हरेक महिलाको निर्णय श्रीमान् (पुरूष) ले नै गर्ने परम्परा अझै पनि हाम्रो समाजबाट हटेको छैन । महिलाप्रतिको सामाजिक तथा न्यायिक दृष्टिकोणको अभावमा महिलाहरू चाहेर पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू आफैमा सक्षम र आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन् जसका लागि उच्च शिक्षा अनिवार्य तत्व हो । यद्यपि कतिपय सामाजिक मूल्य–मान्यताका कारण हरेक कुरालाई तिलाञ्जलि दिएर आफूलाई सीमित गर्नुपर्ने बाध्यता महिलाहरूमा छ । मुना शर्माका अगाडि एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि विवाहको प्रस्ताव आयो । भर्खर एसएलसी उत्तीर्ण शर्माले अभिभावकको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सकिनन् । अब वैवाहिक जीवनबाट आफ्नो अध्ययनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सोचले उनलाई पिरोल्यो । पोखरा सिमलचौरका गोविन्द सुवेदीसँग १७ वर्षमै विवाह गरेकी मुनाले अन्तत: पढाइ रोक्नु परेन । शिक्षित परिवारले बुहारीलाई पढाउन कुनै बन्देज लगाएन । फलस्वरूप उनले कमर्समा डिग्री गरिन् । उनले पढेर प्रमाणपत्र मात्र लिइनन्, सहकारीमा जागिर पनि खाइन् । अध्ययनका लागि क्यानाडा प्रोसेसिङ गरिरहेकी शर्मा त्यसमा समेत सफल भइन् ।
मुना यतिबेला दंग छिन् । ‘मलाई विवाह भनेपछि एकदमै डर लागेको थियो । अब मैले पूरा समय घरपरिवारसँगै घरधन्दामा बिताउनुपर्छ, एक शुद्ध गृहिणी हुनुपर्छ भन्ने थियो तर परिवारले मेरो भावना बुझ्यो र अध्ययन गर्न प्रेरित गर्‍यो फलस्वरूप म सफल भएँ ।’ श्रीमान् र छोराहरूको भविष्य पनि राम्रो हुने भएको छ । उनका श्रीमान् गोविन्द भन्छन्–‘श्रीमतीको पढाइप्रति निकै रुचि थियो । मैले उनको भावनामा ठेस पुर्‍याउन चाहिन । परिवारका अन्य सदस्यहरूले पनि पढ्नबाट रोकेनन् । त्यसैले आज उनकै प्रमाणपत्रबाट हामी सबै क्यानाडा जान पाएका छौं ।’
यता शर्मिला पनि निकै खुसी छिन् प्लस टु उत्तीर्ण गरेर बसेकी उनलाई आफन्तले पोखराका एक युवकसँग विवाहको प्रस्ताव ल्याए । आफन्तको दबाबमा विवाह गरेकी शर्मिलालाई अध्ययनलाई निरन्तरता दिन पाउँदिन कि भन्ने लागेको थियो । श्रीमान् जापान गए पनि परिवारले उनलाई पढ्नबाट रोकेन । फलस्वरूप उनले पनि आफ्नो अध्ययनलाई डिग्रीसम्म पुर्‍याइन् । अहिले डिग्री अध्ययनरत शर्मिला थेसिस पूरा गर्नेबित्तिकै जागिर खाने सोचमा छिन् । एक छोरीकी आमा शर्मिला बुहारी पनि छोरी नै हुन् भन्ने सोचाइ राख्ने परिवारले कहिल्यै बुहारीलाई अवसरबाट वञ्चित गराउँदैनन् भन्छिन् । यसमा श्रीमान्को पनि ठूलो हात हुन्छ । सासू–ससुराले नबुझेका कुरालाई राम्रोसँग बुझाउने हो भने समस्या कम हुन्छन् ।
पोखरा सिर्जना चोककी गीतालाई भने पढाइलाई निरन्तरता दिन बढी कसरत गर्नुपर्‍यो । उनको घरमा सासू र एक देवर थिए । विवाह गरेर आएपछि श्रीमान् विदेश गए । आई.ए. सम्म अध्ययन गरेकी गीताले विवाहको एक वर्ष घरधन्दामा मात्र सीमित हुनुपर्‍यो । ‘एक वर्षपछि मलाई साह्रै पढ्ने रहर जाग्यो र श्रीमान्सँग कुरा राखें, उहाँले पनि हुन्छ भन्नुभयो र सासूलाई पनि भनें, उहाँले सुरूमा मान्नु भएन तर देवरले भाउजूलाई पढ्न रोक्नु हुँदैन भनेर आमालाई सम्झाएपछि मैले पढ्ने बाटो खुल्यो । अहिले अंग्रेजीमा एम. ए. गर्दैछु । एउटा बोर्डिङमा पनि पढाउँछु । घरको काममा सासू र देवरले सघाउनुहुन्छ–गीताले भनिन् । उनी पनि पढ्न पाएकोमा निकै सन्तुष्ट छिन् ।
यी हाम्रा समाजका सकारात्मक कुरा हुन् । अन्तत: धेरै यस्ता महिला दिदीबहिनी छन् जो आफ्नो अध्ययन बीचैमा छोडेर पूरा जीवन घर–गृहिणीमा सीमित छन् । पढेलेखेका र आफूलाई सम्भ्रान्त मान्ने परिवारमा महिलाहरू अझ बढी पीडित हुनुपरेको छ । सामाजिक रूपमा परिवारको इज्जत जोगाउन आफूहरू कुशल बुहारी बनेर दिन बिताउनु परेको कुरा बताउने धेरै महिला अझै हाम्रो समाजमा छन् । पढे पनि जागिर खाए पनि आखिर घरपरिवारको खुसीभन्दा ठूलो अरु हुन सक्दैन ।
स्नातक पूरा गरेर वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेकी मिरा ढकाल अहिले समाजशास्त्रमा एम.ए. गरेर अध्यापन पेसामा छिन् । वैवाहिक जीवनपछि पनि परिवारले ‘सन्तानभन्दा पहिले पढाइ पूरा गर’ भनेर पढ्न प्रोत्साहन गरेपछि डिग्री पास गरेर कलेज पढाउन थालेको उनले बताइन् । महिलाहरू अघि बढ्न शिक्षा अनिवार्य छ । जब ‘महिला शिक्षित हुन्छिन् तब सबै परिवार शिक्षित हुन्छ’ भन्ने सत्यता बुझाउने हो भने वैवाहिक जीवनपछि पनि महिलाहरू उच्च शिक्षाबाट पलायन हुनु पर्दैन भन्छिन्–उनी ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका प्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइराला भन्छन्–‘समाज परिवर्तनको दिशातर्फ गैरहेको छ । महिलालाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोचाइमा वृद्धि भएको छ तर विवाह गरेर पढ्न चाहने महिलाहरूले भने त्यसलाई चाहेअनुरूप अघि बढाउन पाएका छैनन् । पढाइ पूरा गरेर विवाह गर्नुपर्छ तर सबैका लागि त्यो सम्भव पनि हुँदैन । विवाहपछि पनि बच्चा जन्माउनु–हुर्काउनुको जिम्मेवारी पनि स्वयं महिलाले नै गर्नुपर्ने कतिपय कारणहरूले गर्दा उनीहरू अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको हुन्छ । परिवारका अन्य सदस्यले बहन गर्न सक्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने महिलाले हरेक कुरालाई त्याग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । अहिले पिएन क्याम्पसमा त्यस्ता धेरै विवाहिता महिला छन् जो उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सन्ध्याकालीन कक्षामा भर्ना भएका छन् । यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने विवाहपछि पनि महिलाहरू अध्ययनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् तर सबैले यो इच्छा पूरा गर्न सक्दैनन् । अध्ययन गर्न चाहने महिलाहरूलाई पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गराइनु हुँदैन । यसका लागि परिवारले राम्रो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
हाम्रै परिवेशमा स्नेहाजस्ता महिला पनि छन् जो मनभरि पीडा बोकेर वैवाहिक जीवन अघि बढाउँदैछन् । पोखरा एयरपोर्टकी स्नेहा (२२) ले पोखराकै युवकसित विवाह गरिन् । जागिर खाँदै पढिरहेकी स्नेहाले विवाहपछि पनि जागिर र पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहेको बताएपछि श्रीमान्ले जागिर खाने र पढ्ने हो भने ‘माइतै गएर बसे हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिएपछि उनी अघि बढ्न सकिनन् । ‘परिवारविरूद्ध जान सकिन, अन्तत: घरधन्दामै सीमित हुनुपर्‍यो’ उनले भनिन् ।
स्नेहाजस्ता धेरै महिला छन् यहाँ, जो विवाहपछि पढाइ एवं करियरलाई तिलाञ्जलि दिन बाध्य छन् । आफ्नो कमाइ र सन्तुष्टिमा रमाउन चाहने महिलाहरूलाई घर–परिवार र धन–सम्पत्ति अनि इज्जतजस्ता आडम्बरी कुरासँग दाँजेर अवसर र उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु पक्कै पनि न्यायोचित होइन । विवाह भनेको सामाजिक परम्परा हो यसलाई नकार्न सकिँदैन तर विवाहपछि हरेक महिलाको निर्णय श्रीमान्
(पुरूष) ले नै गर्ने कुपरम्परा अझै पनि हाम्रो समाजबाट हटेको छैन । महिलाप्रतिको सामाजिक न्यायिक दृष्टिकोणको अभावमा महिलाहरू चाहेर पनि अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू आफैमा सक्षम र आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन् जसका लागि उच्च शिक्षा अनिवार्य तत्व हो । यद्यपि कतिपय सामाजिक मूल्य–मान्यताका कारण हरेक कुरालाई तिलाञ्जलि दिएर पारिवारिक दबाबमा आफूलाई सीमित गर्नुपर्ने बाध्यता महिलाहरूमा छ ।
मुना, शर्मिला र गीताजस्ता महिलाहरूको पारिवारिक जीवन हेर्ने हो भने महिलाहरूले उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि परिवार र समाजमा पारेको सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्दै परिवारमा छाएको खुसीलाई पनि मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
(लेखिका : पोखरा एक्सप्रेस पाक्षिक खबर पत्रिकाकी प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ)
कार्तिक ११, २०७३ - लक्ष्मीलाई खुसी तुल्याउने उपाय
कार्तिक १०, २०७३ - तिहारमा खुसी हुने उपाय
भाद्र २, २०७३ - स्वयं खुसी रहनुपर्छ
श्रावण १९, २०७३ - स्वयं खुसी रहनुपर्छ
पुस १७, २०७२ - युवा मन खुसी हरदम
आश्विन ११, २०७२ - विवाहपछिको पहिलो दसैं नौलो र जिम्मवारीयुक्त